संसारले एकै उद्देश्यले पर्व जसरी साझा मुक्तिको कामना गरेर मनाउने दिवस रहेछ— अन्तर्राष्ट्रिय मजदुर दिवस । देशले गर्व गर्नुपर्छ, हाम्रो कृषिप्रधान मुलुकमा सर्वसाधारण नेपाली श्रमप्रेमी छन्, श्रम गर्न चाहन्छन् । काम र कामअनुसारको दामको माक्र्सवादी सोचमा आजको समाज सधैँ सचेत छ । आज ४० प्रतिशत युवाशक्ति भएको देशले युवाको श्रम बाहिर बेचिँदा दुःख मान्नुपर्छ ।
विदेशी लगानीको महत्वाकांक्षा
स्वदेशी पुँजीको अपर्याप्तता र दुई अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरी देशलाई सन् २०२२ सम्ममा अति कमविकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुक बनाउने र सन् २०३० सम्ममा दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गरी मध्यम आयस्तरको मुलुक बनाउने सपना पूरा गर्न विदेशी लगानीको आवश्यकता छ । यही आवश्यकता पूरा गर्ने उद्देश्यले सरकारले गत चैत १५ र १६ गते फेरि अर्को लगानी सम्मेलन गरयो । यद्यपि अघिल्लो लगानी सम्मेलनमा अपेक्षा गरिएभन्दा १४ गुणा बढी लगानी प्रतिबद्धता आएको अवस्थामा त्यस्तो प्रतिबद्धतालाई वास्तविक लगानीमा बदल्नका लागि प्रतिबद्धता जनाउने लगानीकर्ता मुलुक वा संघसंस्थाहरूलाई आवश्यक ताकेता नै नगरी पुनः अर्को लगानी सम्मेलन गर्नुलाई अलिकति हतार नै गरिएको हो भन्न सकिन्छ । ताकेता गर्ने र लगानीकर्तालाई लगानीका लागि विश्वस्त तुल्याउने आधारहरूको निर्माणमा सरकार बेलैमा लागिपरेको भए तत्कालका लागि अर्को लगानी सम्मेलनको आवश्यकता नपर्न पनि सक्थ्यो ।
मानिसहरूको मृत्युको प्रमुख कारण भनेकै धूम्रपान, मद्यपान र सुर्तीजन्य पदार्थको अत्यधिक सेवन हो । विभिन्न सञ्चारमाध्यममा हामी सुन्छौं, नेपालको जनसंख्याको करिब २० प्रतिशतले धूम्रपान तथा मद्यपानको सेवनले ज्यान गुमाउनुपरेको अवस्था छ ।
संघीय संरचनामा प्रवेश गरेसँगै प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहको प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र पर्यटन बनेको देखिन्छ । रारा अर्थात् धर्तीकी अप्सरा नेपाली तथा बाह्य पर्यटकको रोजाइको गन्तव्यका रूपमा परिचित हुँदै गएको छ ।
सुस्त आर्थिक वृद्धि हुने देखिएसँगै यो वर्ष युरोपका लागि महŒवपूर्ण वर्ष हुने भएको छ । आईएमएफका अनुसार यो वर्ष ईयूको वृद्धि १.६ प्रतिशतमा ओर्लनेछ ।
भारतमा गत वर्ष प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले त्यहाँका प्रत्येक नागरिकको बैंक खाता खोलाउने उद्देश्यले सञ्चालनमा ल्याएको ‘प्रधानमन्त्री जन–धन खाता’को सफलताबाट सायद सिकेर होला, यताका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पनि गत वैशाखमा ‘समृद्धिसँग जोडौं नाता, खोलौं प्रत्येक व्यक्तिको बैंक खाता’ अभियानको घोषणा गरे । यस अभियानअन्तर्गत हालसम्म बैंक खाता नभएका नागरिकले बैंकमा खाता खोल्दा बैंकका तर्फबाट उल्टै १०० रुपैयाँ राखिदिने घोषणा गरियो ।
कृषिमा खिचडी नीति कहिलेसम्म ?
कृषि विकासका लागि सरकारले आगामी वर्ष पनि अलमलमै बिताउने छनक देखिएको छ । झट्ट हेर्दा कृषिमा केही मीठा वाक्यांश राखिए पनि शुक्रबार संसद्मा प्रस्तुत गरिएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम विगतका खिचडी प्रवृत्तिको दस्तावेजका रूपमा लिन सकिन्छ । हेर्दा सबै छ जस्तो देखिने तर कुन क्षेत्रलाई कति प्राथमिकता दिने भन्ने स्पष्ट नभएको नीति तथा कार्यक्रम आलटाले नीतिकै निरन्तरता मात्र हो । यद्यपि जे लेखिएका छन्, लागू मात्र भए भने पनि कृषिमा धेरै परिवर्तन देख्न सकिने आधार भने छन् ।
उपभोक्ताको माग र व्यवसायीको नाफा
नयाँ दिल्लीमा कुकुरको गुहु पनि बिक्री हुन्छ भन्ने उक्ति छ । यसको अर्थ धेरै जनसंख्या भएको ठाउँमा जे आपूर्ति भए पनि माग हुन्छ भन्ने हो । कुनै गाउँको चोकमा दिनभरिमा पनि बिक्री नहुने कुनै फलफूल सहरको चोकमा केही घण्टामा बिक्री हुन्छ । जनसंख्या धेरै भएको ठाउँमा धेरै प्रकारको सामानको माग गर्ने जनसंख्याको उपस्थिति हुन्छ ।
बिग मर्जर : आवश्यकता, रहर कि बाध्यता
लाभांशको खेती सकिएपछि सेयरबजारमा ‘बिग मर्ज’ को पासा फ्याँकिएको छ । सेयर कारोबारीसँगै नियामक र सरकारका उच्चपदस्थ अधिकारीबाट पनि बेलाबेलामा ‘कहिले संख्या धेरै भएको, कहिले बलियो बैंक’ विचार व्यक्त भइरहेका छन् ।
पन्ध्रौं योजनाको आधारपत्रमा दीर्घकालीन सोचको सान्दर्भिकता
योजना आयोगले हालै पारित गरेको पन्ध्रौं योजनाको मस्यौदा आधारपत्रले नेपाललाई वि.सं. २१०० सम्ममा उच्च आयको विकसित मुलुकमा स्तरोन्नति गर्दै प्रतिव्यक्ति आय १२ हजार १ सय डलर हुने गरी मार्गचित्र प्रस्तुत गरेको छ ।
प्रशिद्ध अमेरिकी म्याराथुन धावक जोनी केलीले ८४ वर्षको उमेरमा ६१औं बोस्टन म्याराथुनको दौड समापन रेखा छुँदै गर्दा दर्शक दिर्घामा बडो आश्चर्यको भाव देख्न सकिन्थ्यो । सामान्यतयाः आम मानिसको बुझाइमा एथ्लेटिक एबिलिटी बढ्दो उमेरसँगै घट्दै जान्छ भन्ने विश्वास रहेको छ ।